China microfiber hafanana mamindra mpanamboatra lamba famaohana an-dakozia vita pirinty | Hefei Super Trade
Lamba famaohana vita pirinty microfiber:
Ho an'ity lamba famaohana vita pirinty microfiber ity dia misy 2 pcs isaky ny set na 3 pcs isaky ny set.
Ho an'ny 2pcs isaky ny set, misy lamba famaohana vita pirinty 1 pc miaraka amina lamba famaohana 1pc miloko marevaka miaraka amina famolavolana stripe.
Ho an'ny 3 pcs isaky ny set, misy lamba famaohana vita pirinty 2 pcs miaraka amin'ny lamba famaohana lovia 1pc miloko marevaka miaraka amina volavolaina.
Ity lamba famaohana vita pirinty microfiber ity dia fanontana hafanana natao pirinty, ny lamba famaohana an-tsoroka mifanentana dia nolokoana tamin'ny loko matevina, ary io loko matevina io dia mifanentana amin'ny iray amin'ireo loko fanontana amin'ny lamba famaohana vita pirinty.
Ny sisin'ity lamba famaohana microfiber vita pirinty ity dia mihidy avokoa, ny lokon'ny kofehy fanjairana ho an'ny lamba famaohana vita printy dia fotsy ihany matetika, ary ny lokon'ny kofehy fanjairana ho an'ny lamba famaohana matanjaka dia mifanaraka amin'ny lokon'ny lamba famaohana lovia matetika.
Ny firafitr'ity lamba famaohana vita pirinty microfiber ity dia polyester 100%, ny habeny dia 41x48m, ary ny lanjany dia 280gsm.
Ny lafiny anoloana an'ity lamba famaohana microfiber vita pirinty ity dia lamba microfiber misy fanontana hafanana ary ny lafiny aoriana dia lamba microfiber mahazatra amin'ny loko fotsy. Ny sisin'ity lamba famaohana vita pirinty microfiber ity dia mihidy loatra, ary ny lokon'ny kofehy manjaitra dia matetika mifanentana amin'ny iray amin'ireo loko pirinty eo anoloana amin'ny lamba famaohana, mahatonga azy io hisasa lamba famaohana vita pirinty microfiber toa tsara be.
Ny firafitr'ity lamba famaohana vita pirinty microfiber ity dia polyester 100%, 30X30cm ny habeny, ary manodidina ny 200gsm ny lanjany.
Ity lamba famaohana microfiber vita pirinty ity dia singa tokana, ary afaka manao 2 pcs isaky ny set na 3 pcs isaky ny sety koa isika.
Mamindra lamba famaohana vita pirinty ny microfiber:
Ny lafiny anoloana an'ity lamba famaohana microfiber ity dia lamba microfiber misy fanontana hafanana ary ny lafiny aoriana dia lamba microfiber mahazatra amin'ny loko fotsy. Overlocked ny sisin'ity lamba famaohana microfiber ity, ary miloko fotsy ny lokon'ny kofehy fanjairana.
Ny firafitr'ity lamba famaohana microfiber transfer ity dia polyester 100%, 38X60cm ny habeny, ary manodidina ny 220gsm ny lanjany.
Ity lamba famaohana microfiber transfer ity dia singa tokana, ary afaka manao 2 pcs isaky ny set na 3 pcs isaky ny sety koa isika.
Ho an'ireo lamba famaohana vita pirinty microfiber ireo, lamba famaohana vita pirinty microfiber ary lamba famaohana miisa microfiber, tena tsara ny fahanginan'ny lokony, ary matanjaka be koa ny fandraisana rano. Ary koa, afaka manao habe hafa isika, lanja hafa, loko hafa ary famolavolana hafa araky ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ireo lamba famaohana vita pirinty microfiber ireo, lamba famaohana vita pirinty microfiber ary lamba famaohana miisa microfiber no tena ampiasaina ao an-dakozia, azontsika ampiasaina izy ireo hanasana lovia na hamafa ny rano na ny vovoka amin'ny latabatra. Azontsika atao koa ny manasa azy ireo hanadio ny varavarankely na fiara na hanao asa fanadiovana hafa.
Teo aloha: lafaoro vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy microfiber ho an'ny lakozia
Manaraka: Fandriana volon'ondry koram ary firakotra Milk Flannel Duvet
lamba famaohana vita pirinty microfiber
lamba famaohana vita pirinty microfiber, lamba famaohana miisa microfiber
servisy an-dakozia microfiber misy hafanana tsara tarehy tr ...
lamba dite landihazo miaraka amina fanangonana Krismasy
lamba famaohana waofle microfiber miaraka amin'ny loko matevina
kidoro chenille microfiber miaraka amina rano mahery ...
Mpihazakazaka latabatra, Fandriana volon'ondry coral, Lamba latabatra PEVA, Cover Milky Flannel Duvet, lamba famaohana an-dakozia, Farafara fandriana microfiber,